नेपालमा २४ घण्टामा थप ९ जना कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु « Mechipost.com
नेपालमा २४ घण्टामा थप ९ जना कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु
प्रकाशित मिति: ६ भाद्र २०७७, शनिबार २१:४२
फिदिम । पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा थप ९ जना कोराना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ । योसंगै नेपालमा कोराना सङ्क्रमणबाट ज्यान गुमाउनेहरुको संख्या १४६ पुगेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा दिएको जानकारी अनुसार सुनसरीमा ६ वर्षीय एक बालिका र ६७ वर्षीय एक पुरुष, पर्सामा ५८, ६१, ४८ वर्षीय तीन पुरुष, बारामा ५८ वर्षीय एक पुरुष, सिराहामा ६८ वर्षीय एक पुरुष, मकवानपुरमा ५६ वर्षीय एक पुरुष, र भक्तपुरमा ७३ वर्षीय एक पुरुष गरि जम्मा ९ जनाको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु भएको हो ।
नेपालमा आइतबार २, सोमबार ३, मंगलबार ७, बुधबार ६, बिहीबार ६ तथा शुक्रबार ११ जनाको कोरोनाबाट निधन संक्रमणबाट भएको थियो । नेपालका ३ जिल्लाहरु मुस्ताङ, म्याग्दी, र हुम्ला अहिले कोरोना संक्रमित छैनन् ।
त्यस्तै, काठमाडौँ, पर्सा, रौतहट, महोत्तरी, सर्लाही र मोरङ जिल्लामा ५ सय भन्दा बढी सङ्क्रमित रहेका छन् । हालसम्म नेपालमा १८ हजार ३ सय ५० जना निको भएका छन् ।
त्यस्तै, पछिल्लो २४ घण्टामा देशभरका विभिन्न स्थानका थप ६ सय ३४ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ । योसँगै कुल सङ्क्रमितको संख्या ३१ हजार १ सय १७ जना पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ ।
आजै १३६ जना डिस्चार्ज भएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिए । हाल नेपालका १२ हजार ६ सय २१ जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेका छन् ।
२४ घण्टामा काठमाडौँ उपत्यका जिल्लाहरु काठमाडौँमा १६०, भक्तपुरमा ५० तथा ललितपुरका ६ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए । उनले काठमाडौँ उपत्यकाको कुन–कुन ठाउँका व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण भएको हो भन्ने जानकारी दिएनन् ।